COPD vs. ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ: ဘယ်ပိုဆိုးလာလဲ | တစ်ယောက်တည်း - ကျန်းမာရေးပညာရေး | မေ 2022
ဖျော်ဖြေရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကုန်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ပြင်းထန်သောအားကစား ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ သတင်း၊ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် နှိပ်ပါ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ဆီးဂိမ်း မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊
အဓိက >> ကျန်းမာရေးပညာရေး >> COPD vs. ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ: ဘယ်ပိုဆိုးလာလဲ
COPD vs. ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ: ဘယ်ပိုဆိုးလာလဲ
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ vs. COPD | ပျံ့နှံ့မှု | ရောဂါလက္ခဏာများ | ရောဂါရှာဖွေရေး | ကုသမှု | အန္တရာယ်အချက်များ | ကာကွယ်တားဆီးရေး | ဘယ်အချိန်မှာဆရာဝန်နဲ့တွေ့မယ် | မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ | အရင်းအမြစ်များ
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်နာတာရှည်အဆုပ်ရောဂါ (COPD) သည်အဆုတ်၏ရောဂါများဖြစ်ပြီးတူညီမှုများစွာရှိသည်။ အခြေအနေနှစ်မျိုးလုံးသည်လေကြောင်းလိုင်းရောင်ရမ်းခြင်း (သို့) လေပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းများကြောင့်တူညီသောလက္ခဏာများရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်လေစီးဆင်းမှုကိုကန့်သတ်ခြင်းသည်အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊
ဓါတ်မတည့်ခြင်းသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းများက အစပြု၍ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါမှရောဂါလက္ခဏာများသည်ပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်။ ရေရှည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြာရှည်စွာဓာတုစိတ်ဖောက်ပြန်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် COPD ရောဂါလက္ခဏာများသည်မမြဲပါ။ COPD နှင့်အတူနာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းကတစ်ရှူးများအားပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်လေလမ်းကြောင်းများနှင့်အဆုတ်သို့ရောဂါဗေဒပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ရောဂါနှစ်မျိုးလုံးသည်နာတာရှည်ဖြစ်သော်လည်း COPD သည်တိုးတက်သောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာရောဂါလက္ခဏာများမှာအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြီး၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်အတူ, ဒီရောဂါထိန်းချုပ်ရန်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်နှင့်စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲသောအခါ, အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအဘို့အမည်သည့်လက္ခဏာတွေတွေ့ကြုံခံစားဖို့မဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကုသနည်းကိုဆုံးဖြတ်ရန် COPD ကိုပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်ခွဲခြားရန်အရေးကြီးသည်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့် COPD အကြားတူညီခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးကြပါစို့။
အရ အမေရိကန်အဆုတ်အသင်း COPD ၏ ၈၅% မှ ၉၀% သည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ စီးကရက်ရှိအဆိပ်များသည်အဆုတ်၏ရောဂါကူးစက်မှုကိုတိုက်ဖျက်နိုင်ခြင်း၊ လေကြောင်းသွားလာမှုကိုအတက်အကျဖြစ်စေခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေပြီး alveoli ဟုခေါ်သောအဆုတ်ထဲရှိသေးငယ်သောလေထုအိတ်ငယ်များကိုဖျက်ဆီးနိုင်သည့်အဆုတ်၏စွမ်းရည်ကိုအားနည်းစေသည်။ လေထုညစ်ညမ်းမှုအပါအ ၀ င်ဓာတုဓာတ်ပြုခြင်းနှင့်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောပတ်ဝန်းကျင်ကို COPD ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကအဆုတ်ကာကွယ် Alpha-1 ပရိုတိန်း၏ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုတားစီးသောမျိုးရိုးဗီဇအခွအေနေမှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းကို alpha-1-deficiency-related emphysema လို့ခေါ်တယ်။
COPD အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ နာတာရှည် bronchitis နှင့် emphysema ။ နှစ် ဦး စလုံးအခြေအနေများမှာ, အဆုတ်ရဲ့လေကြောင်းလိုင်းများတစ်ရှူးများသေစေ, ထူခြင်းနှင့်ရောင်ဖြစ်လာသည်။ ဒီဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါ, ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တစ်သျှူးအတွင်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့နှင့်အောက်စီဂျင်လဲလှယ်မှုလျော့နည်းသွားသည်။ COPD အတွက်ကုသစရာမရှိပါ၊ သို့သော်စော။ ဖမ်းမိပါကကုသမှုကိုဘက်ပေါင်းစုံချဉ်းကပ်မှုဖြင့်စီမံနိုင်သည်။ ဒီနေရာမှာအသေးစိတ်အတွက်အခြေအနေများဖြစ်ကြသည်:
နာတာရှည် bronchitis: အဆုတ်၏လေကြောင်းလိုင်းများတွင် bronchi ဟုခေါ်သောရောင်ရမ်းခြင်းကယားယံခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အကျိုးရလဒ်မှာချောင်းဆိုးခြင်း၊ အုံကျခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းဖြစ်သော်လည်းရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသရန်ကုသမှုနည်းလမ်းများရှိသော်လည်းလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။
Emphysema: alveoli ဟုခေါ်သောအဆုတ်၏လေထုအိတ်များ, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးနေကြသည်။ emphysema တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ Alveoli သည်ကွဲထွက်သွားပြီးသေးငယ်သောအရာများအစားအနည်းကူလေအိတ်ကပ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အဆုတ်၏မျက်နှာပြင်reducingရိယာကိုလျှော့ချပြီးပျက်စီးသွားသောတစ်သျှူးတွင်လေကိုပိတ်မိစေသည်။ ၎င်းသည်သွေးကြောအတွင်းရှိအောက်ဆီဂျင်များရွေ့လျားမှုကိုအားနည်းစေပြီးအသက်ရှူခက်ခဲစေသည်။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသည်နာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည့်ဓာတ်မတည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ယားယံခြင်းများကိုဖြစ်စေသောနာတာရှည်ရောင်ရမ်းသည့်ရောဂါဖြစ်သည်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအကြောင်းတရားများကိုလူသိများသော်လည်းမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအရာများရှိနိုင်သည် - ၎င်းသည်အမွေဆက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ဖုန်မှုန့်၊ မှို၊ ပန်း ၀ တ်မှုန်ကဲ့သို့သောလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ဓါတ်မတည့်ခြင်းနှင့်စီးကရက်မီးခိုးကဲ့သို့ယားယံခြင်းနှင့်ကလေးဘဝထိတွေ့ခြင်းသည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါကူးစက်မှုများကြောင့်အဆုတ်လည်ပတ်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့်ပန်းနာရင်ကြပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အရွယ်ရောက်သူများတွင်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အလုပ်ခွင်တွင်စိတ်တိုလွယ်သည့်ထိတွေ့မှုများသည်အရွယ်ရောက်သူ - စတင်ခြင်းပန်းနာရင်ကြပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဘုံသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအစပျိုးပါဝင်သည်:
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ vs. COPD
COPD သည်ခန့်မှန်းခြင်းကိုသက်ရောက်မှုရှိသည် သန်း ၃၀ အမေရိကန်များ နှင့် သေမင်း၏ 4th ဦး ဆောင်အကြောင်းမရှိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တည်၏။ 2018 ခုနှစ်တွင်အရွယ်ရောက်သူ2သန်း emphysema ခဲ့နှင့်9သန်းနာတာရှည် bronchitis ခဲ့; လူပေါင်း ၁၆ သန်းကျော်အား COPD ရောဂါရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ သို့သော် COPD လူနာများစွာသည်ဤရောဂါနှင့်အတူနေထိုင်ကြသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
အရ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာများ (CDC)၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူ ၁၃ ယောက်တွင် ၁ ယောက်သည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသည်။ 2018 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန် 25 သန်းအောက်မှာပန်းနာရင်ကျပ် - အရွယ်ရောက်သူ 19 သန်းနှင့်ကလေးများ5သန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကလေးများအတွက် ဦး ဆောင်နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါပျံ့နှံ့ vs. vs. COPD
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 30 သန်းအမေရိကန်တွေ COPD ရှိသည်
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန် ၂၅ သန်းသည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါခံစားခဲ့ရသည်
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကလေးများအတွက် ဦး ဆောင်နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်
အစောပိုင်းအဆင့်များ၌ COPD သည်အသက်ရှူကျပ်ခြင်းအနည်းငယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ရောဂါတိုးလာသည်နှင့်အမျှလူတို့သည်နာတာရှည်ချောင်းဆိုးခြင်း (အရေခွံ / သလိပ်များစွာထွက်ပေါ်လာခြင်း)၊ အမြဲတမ်းအသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ မကြာခဏအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါကူးစက်ခြင်း၊ အသက်ပြင်းပြင်းရှူမိခြင်း၊ ရင်ဘတ်တင်းခြင်းနှင့်နာကျင်ခြင်း၊ အပြာရောင်နှုတ်ခမ်းနှင့်လက်သည်းအိပ်ရာ) ။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖို့ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ရဲ့ရောင်ရမ်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်သည့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်အတူလူများ၏လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဓါတ်မတည့်ခြင်းနှင့်အခြားအစပျိုးခြင်းများနှင့်ထိတွေ့ပါကပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူများသည်ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်အုံကြိတ်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်တွင်တင်းကျပ်ခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်းနှင့်အသက်ပြင်းပြင်းရှူခြင်းတို့ဖြင့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ၏ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်သော Airway Hyper-တုန့်ပြန်မှုသည်အမျိုးမျိုးသောအမျက်ဒေါသများနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်လေကြောင်း၏ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းပါဝင်သည်။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလက္ခဏာများ vs. COPD
COPD ကိုရှာဖွေရန်၊ ကိုယ်ခန္ဓာစစ်ဆေးမှုနှင့်ရိုးရှင်းသောအဆုတ်လုပ်ဆောင်မှုစစ်ဆေးမှုဟုခေါ်သည် နတ်သမီးလေး အဆုတ်အလုပ်လုပ်ကြသည်ကိုဘယ်လိုကောင်းစွာစမ်းသပ်ဖျော်ဖြေနေကြသည်။ စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နေစဉ်တွင်လူတစ် ဦး သည်စက်နှင့်ချိတ်ဆက်နေသောပြွန်သေးသေးလေးတစ်ခုနှင့်တွဲနေသောပါးစပ်ထဲသို့ထိုးသွင်းသည်။ စက်သည်လေပမာဏနှင့်တိုင်းတာရာတွင်လူတစ် ဦး သည်လေကိုမည်မျှမြန်မြန်ထုတ်ပစ်သည်ကိုတိုင်းတာသည်။ COPD ကိုဖော်ထုတ်ရန်ဆရာဝန်ကရလဒ်များကိုအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။ သာမန်လူကြီးများတွင် FEV1 / FVC (အတင်းအဓမ္မသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ပမာဏ / အတင်းအဓမ္မအရေးကြီးသည့်စွမ်းရည်) အချိုးမှာ ၇၀-၈၀% ရှိသည်။ ၇၀% အောက်တန်ဖိုးသည် COPD ၏ဖြစ်နိုင်သောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောသွေး၏အောက်စီဂျင်အဆင့်ကိုတိုင်းတာရန်ထိုကဲ့သို့သောရင်ဘတ်ဓာတ်မှန်သို့မဟုတ်သွေးလွှတ်ကြောသွေးဓာတ်ငွေ့စမ်းသပ်မှုအဖြစ်အပိုဆောင်းစမ်းသပ်မှု, အဆုတ်အောက်စီဂျင်နှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ကိုဖလှယ်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းအဆုံးအဖြတ်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ကြသည်။
အသက်ရှူမ ၀ င်ခြင်း၊ မကြာခဏချောင်းဆိုးခြင်း၊ ရင်ဘတ်တင်းခြင်း (သို့) အခေါင်းပေါက်ခြင်းကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများကိုခံစားနေရသောလူများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကိုစစ်ဆေးရန်အခြေခံစာမေးပွဲများကို ပြုလုပ်၍ ကျန်းမာရေးစာမေးပွဲဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ COPD အတွက်စမ်းသပ်ခြင်းကဲ့သို့ပင် spirometry သည်အဆုတ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ပြုလုပ်သည်။ သွေးသို့မဟုတ်အရေပြားဓာတ်မတည့်ခြင်းသို့မဟုတ် methacholine စိန်ခေါ်မှုစမ်းသပ်မှု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစပျိုးရန်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ က FeNo စမ်းသပ်မှု နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ကိုထုတ်လွှတ်သည်။ ဆရာဝန်များကရောင်ရမ်းခြင်းမည်မျှရှိသည်နှင့်ရှူရှိုက်မိပါကရှူရှိုက်မိခြင်းကမည်မျှထိရောက်သည်ကိုဆရာဝန်များအားပြောပြသည်။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ vs. vs. COPD
COPD သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ ကုသမှု ရောဂါလက္ခဏာများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းပါဝင်သည် COPD လူနာအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးသောမည်သည့်ဆေးမျှမရှိပါ၊ ထို့ကြောင့်ထိရောက်သောကုသမှုအစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ဆရာ ၀ န်တစ် ဦး နှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဆေးအမျိုးမျိုး၊ အဆုတ်ကုထုံးများ၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း၊ လူနေမှုပုံစံစသည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များအားထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားခြင်းကိုအမြဲတမ်းကုသခြင်းအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
COPD အတွက်ဆေးများတွင်လေထဲရှိကြွက်သားများကိုဖြေလျော့ရန် bronchodilators များပါ ၀ င်သည်။ ကာလတိုဆေးများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်အရာများတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိပြီးကြာရှည်စွာဆေးကုသမှုတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။ ရှူရှိုက်မိသော corticosteroids သည်လေလမ်းကြောင်းများတွင်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေပြီးရှူရှိုက်မိသောရှူရှိုက်မိသူများသည် bronchodilator နှင့် corticosteroid နှစ်မျိုးလုံးရှိသည်။ ရှူရှိုက်မိသော bronchodilators နှင့် corticosteroids များကိုရှူရှိုက်မိသူများအဖြစ်ရရှိနိုင်သော်လည်းအချို့သည် nebulizing စက်ဖြင့်အသုံးပြုရန်အတွက်အဖြေများရရှိနိုင်သည်။ ပါးစပ် steroids, ရေတိုယူ, မီးတောက် -ups ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အဆုတ်ရောင်ရမ်းခြင်းလျှော့ချပေးပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သော bronchitis သို့မဟုတ်အဆုတ်ရောင်အဖြစ်စူးရှသောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါကူးစက်မှုများတွင်, ပantibိဇီဝဆေးကဲ့သို့ Zithromax သတ်မှတ်နိုင်သည်။ phosphodiesterase-4 inhibitors နှင့် theophylline ကဲ့သို့သောဆေးဝါးများ , ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်လေကြောင်းလိုင်းများလျှော့ချခြင်းဖြင့်အသက်ရှူမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
ရှူရှိုက်မိပါ corticosteroids :
Breo Ellipta (fluticasone နှင့် vilanterol)
Trelegy Ellipta (fluticasone, umeclidinium နှင့် vilanterol)
Symbicort (formoterol နှင့် budesonide)
Advair Diskus (fluticasone နှင့် salmeterol)
Combivent Respimat (albuterol နှင့် ipratropium)
Bevespi Aerosphere (formoterol နှင့် glycopyrrolate)
Stiolto Respimat (tiotropium နှင့် olodaterol)
Anoro Ellipta (umeclidinium နှင့် vilanterol)
Duaklir Pressair (aclidinium နှင့် formoterol)
Utibron (glycopyrrolate နှင့် indacaterol)
DuoNeb (albuterol နှင့် ipratropium)
အခြား COPD ကုသမှု
ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း အဆုတ်ပျက်စီးခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်နှင့်ရောဂါလက္ခဏာများပိုမိုဆိုးရွားလာစေရန် COPD လူနာများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းကိုဘဝ၏အရည်အသွေးအပေါ်အကြီးမားဆုံးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိတွေ့မှုထိန်းချုပ်ခြင်း အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေခြင်းနှင့်လေထုညစ်ညမ်းခြင်း၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောအခိုးအငွေ့များဖြစ်စေသော COPD ပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်း COPD လက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်။
ကျန်းမာသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှုများ လမ်းညွှန်လမ်းညွှန်အဆုတ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်များမှတဆင့်ရောဂါနှင့်အတူလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုထိန်းချုပ်ကူညီဖို့လေ့ကျင့်ခန်း, ကျန်းမာအစားအစာနှင့် COPD အကြောင်းကိုပညာရေးပါဝင်သည်။
ဖြည့်စွက်အောက်စီဂျင် အကယ်၍ သွေးအောက်စီဂျင်ပမာဏနည်းလွန်းလျှင်ခရီးဆောင်အကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်အလားတူကိရိယာမှတစ်ဆင့်ထောက်ပံ့နိုင်သည်။ အောက်စီဂျင်ကုထုံး COPD ရှိသူတစ် ဦး ၏သက်တမ်းကိုရှည်စေနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အတွက်ရည်မှန်းချက် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသ ရောင်ခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ရောဂါလက္ခဏာ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ကြိမ်နှုန်းကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ကုသမှုကိုစီမံရန်အတွက်အချို့သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများကaအထွတ်အထိပ်စီးဆင်းမှုမီတာ ။ ဒီလက်ကိုင်ကိရိယာကိုအဆုတ်ကနေလေကိုဘယ်လိုစီးဆင်းသလဲဆိုတာတိုင်းတာရန်ကူညီနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါများစွာရှိသည်။
အသက်ရှူလွယ်ကူစေရန်အလျင်အမြန်ကုသသောဆေးများစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်လေကြောင်းမှရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းများကိုလျှော့ချပေးခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုကယ်ဆယ်ရေးရှူရှိုက်သူများအဖြစ်ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ အဓိကကုသမှုများတွင် -
တိုတောင်းသောသရုပ်ဆောင် bronchodilators: bronchodilators လို့ခေါ်တဲ့မြန်ဆန်တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဆေးတွေဟာပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်ချိန်မှာရောဂါလက္ခဏာတွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာချိန်မှာအသုံးပြုကြပြီးလေတွေကိုအပန်းဖြေဖို့နဲ့အသက်ရှူဖို့ပိုလွယ်ကူစေပါတယ်။ Albuterol ဆေးကိုမကြာခဏကယ်ဆယ်သောရှူရှိုက်မိသူအဖြစ်ရည်ညွှန်းလေ့ရှိပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
ရှူရှိုက်မိသော corticosteroids: ရှူသွင်းမိသော corticosteroids သည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။
Leukotriene အထူးပြု: Leukotriene ပြုပြင်မွမ်းမံသူများသည်ဓါတ်မတည့်ခြင်းများကိုတုံ့ပြန်ရန်လေကြောင်းလိုင်းများကိုကန့်သတ်စေသည့် leukotrienes, ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ဓာတုပစ္စည်းများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
ပေါင်းစပ်ရှူရှိုက်မိပါ: ပေါင်းစပ်သောရှူရှိုက်မိသည့်ရှူသွင်းသူများတွင် corticosteroid ပါရှိပြီးရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အဆုတ်များကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်လေကြောင်းလိုင်းများကျယ်ဝန်းစေခြင်းဖြင့်အသက်ရှူလွယ်ကူစေရန် bronchodilator များပါ ၀ င်သည်။
Advair HFA (salmeterol နှင့် fluticasone)
Dulera (mometasone နှင့် formoterol)
Nululization solutions: COPD ကဲ့သို့ပင် nebulization solution များကိုလည်းပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသမှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ခံတွင်း steroids: ၎င်းကိုရောင်ရမ်းမှုလျှော့ချရန်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအပြီးတွင်တစ်ပတ်မှနှစ်ပတ်အထိသတ်မှတ်နိုင်သည်။
dupixent (dupilumab ဆေးထိုး)
ဓာတ်မတည်ခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းကိုရှောင်ရှား ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားသည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသရန်အတွက်ခွင့်မပြုပါ။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်သောရာသီအလိုက်ဓာတ်မတည့်မှုများကိုကုသရာတွင်ထိရောက်ပါသည်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးပေါ်နေထိုင်ခြင်း ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကိုကာကွယ်ရာတွင်အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းသည်ကိုယ်ခံအားစနစ်အားအားကောင်းစေပြီးရောဂါလက္ခဏာများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။
Non-steroidal ထိုး ၏ anti-IgE နှင့် anti-IL5 monoclonal ပantibိပစ္စည်းများ ပြင်းထန်။ ထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲသည့်ရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူများကိုရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချရန်နှစ်ပတ်မှရှစ်ပတ်တိုင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားပantibိပစ္စည်းမတည့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်အတူလူများအတွက်တိကျသောမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားပါဝင်သည် Xolair(omalizumab) နှင့် နူကလာ(mepolizumab) ။
Bronchial thermoplasty ပစ္စုပ္ပန်ချောချောမွေ့မွေ့ကိုလျှော့ချရန် bronchoscope ကိုအပူပေးသည့် bronchoscope ကိုအသုံးပြုသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်ပြင်းထန်သည့်ပန်းနာရင်ကြပ်ကိုကုသရာတွင်ထိရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးပေါ်နေထိုင်ခြင်း
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည်လူတစ် ဦး အားဆေးလိပ်သောက်သူဖြစ်စေ၊ ရေရှည်ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူဖြစ်စေဖြစ်စေ COPD ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်အန္တရာယ်အရှိဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူများသည်အထူးသဖြင့်သူတို့သည်ဆေးလိပ်သောက်သူများဖြစ်လျှင် (ဒုတိယအကြိမ်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါတွင် COPD ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်) နှင့်ဖုန်မှုန့်၊ ဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အငွေ့များနှင့်ထိတွေ့မှုအန္တရာယ်များစေသည့်လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်သည်။ အဆုတ်တစ်သျှူးကိုပျက်စီးစေသည့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာရောဂါ Alpha-1 antitrypsin ချို့တဲ့ခြင်းသည် COPD ကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါမိသားစုများထဲမှာ run တဲ့အဆုတ်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အရ အမေရိကန်အဆုတ်အသင်း , မိဘ၏ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သည်မိသားစုပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသမိုင်းမရှိသောလူတစ် ဦး ထက်သူတို့၏တစ်သက်တာကာလအတွင်းက၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သုံးခုမှခြောက်ကြိမ်ပိုဖွယ်ရှိသည်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ လေထုညစ်ညမ်းခြင်းစသည်တို့ကိုထိခိုက်စေသည့်ကလေးဘဝအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်မှုများကလူတစ် ဦး ၏ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေများပြားစေသည်။ အဝလွန်ခြင်းသည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုမိုမြင့်မားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအန္တရာယ်အချက်များ vs. COPD
လူတစ် ဦး အနေဖြင့် COPD ကိုတားဆီးရန်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးနည်းလမ်းမှာဆေးလိပ်မသောက်ရန်သို့မဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်ပြီးလျှင်ရပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းသည် COPD လူနာများအတွက်အဆုတ်ကျန်းမာရေးပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းနှင့်သူတို့၏သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အရေးအကြီးဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တစ်ပတ်ရစ်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်နှင့်ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့်အငွေ့ကဲ့သို့သောယားယံခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ အကြံပြုထားသောကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါများကိုရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်းသည်ကူးစက်ရောဂါရှိသူများကို COPD တိုးပွားလာခြင်းကိုတားဆီးရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်။
စီးကရက်မီးခိုးပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်အတူအလွန်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်, သူသည်လည်းတစ်ပတ်ရစ်မီးခိုးထိတွေ့မှုကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ဓါတ်မတည့်ခြင်းနှင့်ဓာတုဓာတ်ပြုခြင်းကိုတားဆီးခြင်းသည်ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါရှိသူများအတွက်ကျန်းမာနေပြီးတုပ်ကွေးနှင့်အခြားပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးများအတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အရေးကြီးသည်။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသမှုအစီအစဉ်နှင့်အတူလူများ, သတ်မှတ်ထားသောအဖြစ်၎င်းတို့၏ဆေးဝါးများကိုယူ။ , ကကပ်သင့်ပါတယ်, immunotherapy (သို့) ဓာတ်မတည့်မှုများသည်တိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Initiative ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၏ပြန့်ပွားသို့မဟုတ်ပြicationsနာများကာကွယ်တားဆီးသို့မဟုတ်လျော့နည်းစေရန်သက်သေပြနည်းလမ်းတွေပေး, ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလူနာတွေအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ vs. COPD ကာကွယ်တားဆီးဖို့ကိုဘယ်လို
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများကြုံတွေ့ရပါက၎င်းသည် COPD သို့မဟုတ်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်နိုင်မရသိရန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဆရာဝန်တစ် ဦး သည်တိကျမှန်ကန်သောရောဂါလက္ခဏာကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများကိုကုသရန်တစ် ဦး ချင်းကုသမှုအစီအစဉ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်စေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့် COPD အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါတစ်ခုဖြစ်သော bronchial tubes သို့မဟုတ် airways များကိုထိခိုက်စေပြီး၎င်းတို့သည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်စဉ်အတွင်းရှူရှိုက်ရန်ခက်ခဲပြီးအသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်ရင်ဘတ်တင်းကျပ်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ COPD သည်ဤရောဂါလက္ခဏာများကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော်လည်း၎င်းသည် Phlegm နှင့်အတူတစ်သမတ်တည်းချောင်းဆိုးခြင်းကိုပိုမိုကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိသည်။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်မတူဘဲ COPD သည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့်အဆုတ်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေသည့်နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်ပြီးမကြာခဏဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်အတူအသက်ရှူခြင်းပုံမှန်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးပြန်လာပေမယ့် COPD လက္ခဏာတွေပိုပြီးပုံမှန်ဖြစ်ကြသည်။ များသောအားဖြင့် COPD သည်အသက် ၄၀ ကျော်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လူများတွင်ဖွံ့ဖြိုးပြီး၊ နာတာရှည်ရောဂါ၏နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်လာသည်sthmaမည်သည့်အသက်အရွယ်မရွေးလူတို့တွင်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်သည်။
ပိုဆိုးတာက: COPD သို့မဟုတ်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ?
COPD ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါထက်ပိုဆိုးသည်။ ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကုသမှုအစီအစဉ်ဖြင့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလက္ခဏာများကိုအဆုတ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပုံမှန်အဖြစ်သို့ပြန်ရောက်စေရန်သို့မဟုတ်ပုံမှန်နီးကပ်စေရန်အတွက်လုံလောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အခြေအနေကိုယေဘူယျအားဖြင့်ပြောင်းပြန်ပြောင်းနိုင်သည်။ COPD ၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုအမျိုးမျိုးသောကုသမှုများဖြင့်ကောင်းစွာစီမံနိုင်သော်လည်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါသည်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်နိုင်သည့်အတွက်အဆုတ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုထိခိုက်စေသည့်မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမျှပြန်လည်မတည်ဆောက်နိုင်ပါ။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ COPD သို့ပြောင်းလဲနိုင်သလား?
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအမြဲ COPD ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြမထားဘူး, ဒါပေမယ့်သူကအန္တရာယ်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ညံ့ဖျင်းသောထိန်းချုပ်ထားသောပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်အတူစီးကရက်မီးခိုးသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အငွေ့များကဲ့သို့အမျက်ဒေါသများကိုအဆက်မပြတ်ထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအဆုတ်ပျက်စီးမှုသည်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်နိုင်သည့်အပြင်လူတစ် ဦး ၏အဆုတ်ရောဂါ COPD ကိုတိုးပွားစေသည်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့် COPD နှစ်ခုစလုံးရှိနိုင်သည် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ - ကူးစက်ရောဂါထပ်တူထပ်မျှလက္ခဏာ (ACOS) ။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှူရှိုက်မိပါ COPD ကူညီပါသလား
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အသုံးပြုတူညီသောရှူရှိုက်မိပါအချို့ကိုလည်း COPD ကုသမှုအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။ Bronchodilators များသည်လေကြောင်းလိုင်းများကိုအနားယူရန်နှင့်အသက်ရှူလွယ်ကူစေရန်မြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီးရှူရှိုက်မိသည့် corticosteroids သည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။
COPD အကြောင်းအခြေခံ , CDC
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ , CDC
နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါ (COPD) အမေရိကန်အဆုတ်အသင်း
COPD နှင့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ အမေရိကန်မိသားစုသမားတော်အကယ်ဒမီ
COPD ရောဂါနှင့်သေဆုံးမှုအမျိုးသားနှင့်ပြည်နယ်အဆင့်ခန့်မှန်းချက် - အမေရိကန်၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ COPD ဖောင်ဒေးရှင်း
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအချက်အလက်များ , ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်အမေရိက၏ဓာတ်မတည်ဖောင်ဒေးရှင်း
ပြင်းထန်သည့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ: anti-IgE သို့မဟုတ် anti-IL-5 , ဥရောပလက်တွေ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဂျာနယ်
ဤဆေးများသည်စက်တင်ဘာလအတွင်းက SingleCare တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဆေးများဖြစ်သည်
မွေးဖွားခြင်းထိန်းချုပ်မှု nexplanon သည်မည်သည့်အချိန်တွင်စတင်အလုပ်လုပ်သနည်း